Isticmaalka bacaha ayaa nolosheena u keenay raaxo badan, laakiin sidoo kale waxay keentay dhibaatooyin deegaanka qaarkood. Sidaa darteed, si loo xaddido isticmaalka dadka ee bacaha, dukaamada waaweyn ee waaweyn ayaa bilaabay inay hirgeliyaan nidaam lacag-bixineed. Xaaladdan oo kale, isticmaalka bacaha ayaa si tartiib tartiib ah loo dhimay, gaar ahaan isticmaalka bacaha jaakadaha supermarket-ka. Kadibna bacaha aan tolmada lahayn iyo bacaha wax iibsiga ee deegaanka ayaa soo galay nolosheena, laakiin kuwa ugu aqbali karo dadweynaha waa bacda jaakada dharka, taas oo aan ahayn oo kaliya moodada iyo quruxda, laakiin sidoo kale deegaanka saaxiibtinimo iyo waara. Haddaba sida loo sameeyo bacda jaakada dharka? Marka xigta, aan eegno tillaabooyinka lagu sameeyo bacda jaakadaha dharka.
Ugu horreyntii, alaabta aasaasiga ah ee looga baahan yahay nooca bacaha jaakadaha ayaa ah mashiinka dharka, qalinka iyo maqasyada. Dhab ahaantii, aad bay u fududahay in la sameeyo bacda jaakadaha dharka ah. Habka ugu muhiimsan waa habka sawirka. Waxaad u baahan tahay inaad si xirfad leh u sawirto qaabka jaakada dharka. Ka dib markii qaabka maaddada la sawiro, waxaanu gooyn doonaa sawirka la sawiray maqas si waafaqsan cabbir gaar ah.
Tallaabada labaad waa tallaabada ugu muhiimsan, taas oo ah in la tolo dharka jaakadaha la gooyey. Dhab ahaantii, habka tolida waa mid aad u fudud. Kaliya qari hal dhinac oo ka mid ah dharka, ka dibna ku tosho mashiinka tolida si aad u sameyso hawlgal makaanaysan oo keliya. Si loo tolo labada dhinac ee dharka, ka dib labada dhinacba la tolo, waxaan ku dhejineynaa cidhifka hoose, ugu dambeyntiina tola gacanta. Waa in la ogaadaa in ay tahay in aan ku dhejinno dhabarka bacda jaakada, haddii kale quruxdeeda ayaa lumi doonta.
Ka dib marka tolida la dhammeeyo, waxaan fiiro gaar ah u siinnaa geesaha oo aan u rogno bacda jaakadda dharka ah, taasina waa boorso jaakad dhar ah oo qumman. Qaadashada bacda jaakadaha dharka ee dukaamada ma aha oo kaliya moodada iyo quruxda, laakiin sidoo kale deegaan ahaan u fiican. Waxa ka sii muhiimsan waa inaad adigu sameyso, waxaa jiri doona dareen sharafeed.
Eva Hard Case , Gym Armband Bag, Consumer Electronics Accessories , Eva Hard Shell Pencil Case loogu talagalay Carruurta 2, Kids Bag School , Football qaabeeya Guddoomiyaha Case ,